အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏ဗဟိုနှင့်အရံယန္တရားများ - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
အမျိုးသားလိင်စိတ်နိုးထဗဟိုနှင့် Peripheral ယန္တရားများ
San Diego မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာအားဖြင့်
MALE လိင်စိတ်နိုးထဗဟို Mechanical
ဗဟိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ် (CNS) ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို၏စည်းမျဉ်းညံ့ဖျင်းနားလည်သဘောပေါက်နေဆဲဖြစ်သည်။ penile စိုက်ထူ၏ထိန်းချုပ်ရေးအတွက် CNS အတွင်းမျိုးစုံနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်နွယ်က်ဘ်ဆိုက်များတစ်ပျံ့ကွန်ယက်ဖွဲ့စည်းသည်နှင့်တိကျသောအာရုံခံလမ်းကြောင်းအကြီးအကျယ် undefined ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်တိုးတက်မှုယောက်ျားအတွက်လိင်စိတ်နိုးထတုံ့ပြန်မှုထိန်းညှိကြောင်း key ကိုဗဟိုအဆောက်အဦများဖော်ထုတ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာအထီးဘာသာရပ်များအတွက် positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) ကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများအမြင်အာရုံ evoked လိင်စိတ်နိုးထဖို့တုန့်ပြန် activated သောဦးနှောက်၏တိကျသောဒေသများဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤယုတ်ညံ့ယာယီ cortex (မြန်မာနိုင်ငံသ), ညာဘက် insula, ညာယုတ်ညံ့တိုကျရိုကျ cortex နဲ့ဘယ်ဖက် anterior cingulate cortex ပါဝင်သည်; အမြင်အာရုံအသင်းအဖွဲ့, အာရုံခံသတင်းအချက်အလက်နှင့်စိတ်ခွန်အားနိုးပြည်နယ်များရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့နှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနှင့် neuroendocrine လုပ်ဆောင်ချက်များကို၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်ဆက်စပ်ဒေသများ။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်စမ်းသပ်လေ့လာမှုများဗဟိုထိန်းချုပ်မှုထပ်မံ elucidating ယန္တရားများအတွက်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောသက်သေပြခဲ့ကြသည်။ အထူးသဖြင့်, ထို hypothalamus အတွင်း medial preoptic ဧရိယာ (MPOA) ၏ဆွနှင့် paraventricular နျူကလိယ (PVN) ကြွက်များတွင်လိုလားသူ erectile အာရုံကြောလမ်းကြောင်းလှုံ့ဆော်ဖို့လူသိများသည်။ တိုင်းဒေသကြီးများလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အမြင်အာရုံ (occipital), ထိတွေ့နိုင်သော (thalamus), နှင့် olfactory (rhinencephalon) ဆွအဖြစ်စိတ်ကူးယဉ် input ကို (limbic သည့်စနစ်) မှအာရုံခံ input ကိုလက်ခံရရှိသည် CNS အစိတ်အပိုင်းမျိုးစုံကိုမှသတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်နှစ်ဦးစလုံး။ dopamine နဲ့ oxytocin ၏တိုးမြှင့်အဆင့်ဆင့်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြနှင့်ဤ neurotransmitters အသီးသီး, အ MPOA နှင့် PVN အတွက်လိုလားတဲ့ erectile တုံ့ပြန်မှုဖြန်ဖြေအတွက်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍကစားရန်စဉ်းစားနေကြသည်။
ဆနျ့ကငျြ, ဦးနှောက်ကို stem အတွက်နျူကလိယ paragigantocellularis (nPGi) လိင်စိတ်နိုးထတခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory အကျိုးသက်ရောက်မှုပြုပြင်။ အဆိုပါကျောရိုး၏ sacral အစိတ်အပိုင်းများဖို့ nPGi စီမံကိန်းအတွက်ကနေအာရုံကြောနှင့် serotonin လွှတ်လိုက်ပါ။ ဤသည်မှာအဘယ်ကြောင့် SSRI ရဲ့ (တိကျတဲ့ serotonin reuptake inhibitors) ကိုအကြောင်းပြချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုစိတ်ကျရောဂါအဖြစ် postulated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ SSRI မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကုသယောက်ျားအများဆုံးနှောင့်နှေးသို့မဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်ပိတ်ဆို့ပြကတည်းကစိတ်ဝင်စားစရာ, အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်မှုကိုလည်းအောင်မြင်စွာ SSRI ကုသမှုနှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲပြီ။ အဆိုပါ locus coeruleus လည်း hypothalamic အရေးပါအဖြစ်ကျောရိုးနှင့်အတူ interface တစ်ခုကိုစာနာအာရုံကြောကနေတစ်ဆင့် inhibitory input ကိုပြုပြင်။ ကြောင့် REM စဉ်အတွင်း locus coeruleus ၏နှိမ်နင်းလှုပ်ရှားမှု (လျင်မြန်သောမျက်စိလှုပ်ရှားမှု) ကိုစာနာ input ကို၏ဆုတ်ခွာအိပ်ပျော်ခြင်း nocturnal penile tumescence ၏ဖြစ်စဉ်များဆီသို့ဦးတည်စဉ်းစားသည်။
နောက်ထပ်ခန္ဓာဗေဒနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့လေ့လာမှုများ penile စိုက်ထူထိန်းညှိသော CNS အတွင်းအာရုံကြော circuitry ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတိုးပွားစေသင့်ပါတယ်။ သူတို့အလားအလာတိကျတဲ့အာရုံခံ subpopulations အတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့်အဲဒီ receptor မျိုးကွဲဖြန့်ဖြူးများ၏ site ကိုပေါ် မူတည်. ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကွိုးစားအားထုဖြစ်နိုင်သည်ကတည်းက neurotransmitters များ၏အခန်းကဏ္ဍ defining, တစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
MALE လိင်စိတ်နိုးထမှု Peripheral Mechanical
penile စိုက်ထူ၏• Neurogenic disease အာရုံကြောစည်းမျဉ်းဥပဒေ
လိင်တံထဲမှာ Erectile function ကို erectile တစ်ရှူးနှင့် perineal striated ကြွက်သားမှကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ (parasympathetic နှင့်စာနာ) နှင့် somatic (အာရုံခံခြင်းနှင့်မော်တာ) လမ်းကြောင်းအားဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ အရံအာရုံကြောသုံးစုံလိင်တံ innervate ။
ရေယိုစိမ့်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်တာဝန်ရှိသည့်စာနာအာရုံကြောများ (T10 - L2)၊ ကော်ပိုရေးရှင်းသို့ပရောဂျက်အပြင်ဆီးနှင့်အာရုံကြောများမှတဆင့်ဆီးကြိတ်နှင့်ဆီးအိမ်လည်ပင်းတို့ကိုပါတာဝန်ယူသည်။ Postganglionic noradrenergic အမျှင်များသည် Walsh ၏အာရုံကြောဟုခေါ်သောအာရုံကြောရှိဆီးကြိတ်ထဲသို့ posterolateral ကိုဖြတ်သန်း။ coraa cavernosa သို့အလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သွေးကြောများနှင့် cavernosal trabeculae များ၏ချောမွေ့ကြွက်သားတက်ကြွစွာကျုံ့ဆက်လက်တည်ရှိရမည်ကတည်းက adrenergic သေံ detumescence စတင်နှင့်လိင်တံ၏ flaccid ပြည်နယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်အလွန်အရေးပါသည်။ nvernpinephrine သို့ cavernosal trabecular ချောမွေ့သောကြွက်သားများညှိနှိုင်းခြင်းကို alpha-1 adrenergic receptors ကကမကထပြုပေးသည်။ adrenergic အာရုံကြောများပေါ်သို့ pre-junctional alpha-2 adrenergic receptors သည် neurotransmission ကိုတားဆီးပေးပြီးလျှို့ဝှက်သော norepinephrine များအတွက်အလိုအလျှောက်တုံ့ပြန်ချက် loop ကိုပေးသည်။ Cholinergic အာရုံကြောများသည် adrenergic အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုကိုတားစီးရန် prectionctionc muscarinic receptors များအားလုပ်ဆောင်သည်။
ဒါဟာ vasoconstriction ဆီသို့ဦးတည် adrenergic မညီမမျှစိုက်ထူချို့ယွင်းနေသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နေစဉ်ကဒီအချိုးမညီမျှမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေကြောင်းတိကျသောအချက်အိုမင်း, မသိရှိရသေးနှင့် / သို့မဟုတ်ဆက်စပ်ရောဂါပြည်နယ်များ norepinephrine အရေးယူဘို့ပိုမိုမြင့်မားထိရောက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, တိကျတဲ့ adrenergic အဲဒီ receptor Subtype ၏ရွေးချယ်တက်-စည်းမျဉ်းဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ norepinephrine erectile function ကိုတစ် key ကို modulator တွေကိုဖြစ်ပါသည်ကတည်းက, alpha-adrenergic အဲဒီ receptor ရန် ED ၏ကုသမှုအတွက်အသုံးဝင်သောသက်သေပြစေခြင်းငှါယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်။ ထိုကဲ့သို့သော yohimbine နှင့် phentolamine အဖြစ်မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူလက်တွေ့အတွေ့အကြုံက ED နှင့်အတူအမျိုးသားများတွင်ကွဲပြားထိရောက်မှုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ penile စိုက်ထူ၏ဇီဝြဖစ်စဉ်အတွက် alpha-adrenergic receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပိုပြီးလုံးဝတခြားနေရာပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
S2 - S4 ကျောရိုးအပိုင်းအစများ၏အလယ်အလတ်ဘက်ပေါင်းစုံအရေးပါသောအရာများမှဆင်းသက်လာသည့် parasympathetic အာရုံကြောများသည်လိင်တံကိုအဓိကစိတ်လှုပ်ရှားစေသည့်အရာများပေးပြီး penile vasculature နှင့်နောက်ဆက်တွဲစိုက်ထူခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ Sacral foramina မှတဆင့်ထွက်သောဤအာရုံကြောများသည်ပါးစပ်အတွင်းရှိအာရုံကြောနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းအာရုံကြောများအစရှိသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ganglionic nonadrenergic၊ noncholinergic (NANC) အာရုံကြောအမျှင်များနှင့်အတူ cavernous အာရုံကြောများအတွင်းသို့ Corpa cavernosa သို့သွားသောအာရုံကြောအမျှင်များသို့ဖြတ်သန်းသွားသည်။ Vasoactive အူလမ်းကြောင်း peptide (VIP) နှင့်နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် (NO) တို့သည် NANC neurotransmitter နှစ်ခုဖြစ်ပြီးမကြာခဏ penile တစ်သျှူးအတွင်းရှိအာရုံကြောများ၌အတူတကွတည်ရှိသည်။ eileile function ကိုအပေါ်ဒီ peptide နှင့်အတူစမ်းသပ်ရလဒ်များကိုကိုက်ညီမှုနေသောကြောင့်သို့သော် penile စိုက်ထူ၏ modulator အဖြစ် VIP ၏အခန်းကဏ္uncleကိုမသိရသေးပါ။ တိရိစ္ဆာန်များနှင့်လူသားများတွင် VIP ၏ Intracavernosal စီမံခန့်ခွဲမှုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်မှုကနေတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း tumescence အထိအပြည့်အဝစိုက်ထူအထိ, ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် VIP အတွက်တိကျ။ ထိရောက်သောရန်သူမရှိခြင်းသည် erectile function တွင်ယင်း၏အခန်းကဏ္ concerning နှင့်စပ်လျဉ်း။ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများကိုနှောင့်နှေးစေသည်။
NANC parasympathetic input ကို၏အဓိကဖျန်ဖြေ NO ဖြစ်ပါတယ်။ နို့တိုက်သတ္တဝါများတွင်ကျယ်ပြန့်သောဇီဝကမ္မဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကိုထိန်းညှိနိုင်သည့်အလွန်ဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်မတည်ငြိမ်သောဓာတ်ငွေ့ NO ၏စွမ်းရည်သည်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ် ၂ ခုအတွင်းကထင်ရှားပေါ်လွင်ခဲ့သည်။ ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်နှင့်အတူ NO သည်ထူးခြားသောအဓိက effector မော်လီကျူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ယခင်ခွဲခြားခြင်းအစီအစဉ်များကိုမလိုက်နာသောဆဲလ်အတွင်းရှိဒုတိယ messenger ၏လက္ခဏာများဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုသိုလှောင်မှုအနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမလိုအပ်ဘဲဝယ်ယူမှုတွင်ပုံဖော်။ ၎င်းသည်“ ရိုးရာ” receptor molecule ထက်ပျော်ဝင်နေသောအင်ဇိုင်း (guanylate cyclase) ကိုတိုက်ရိုက်သက်ဝင်စေသည်။ NO ကိုနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthase (NOS) မှထုတ်လုပ်ပြီးအမိုင်နိုအက်ဆစ် L-arginine နှင့်မော်လီကျူးအောက်စီဂျင်ကိုအောက်ခံအနေဖြင့် အသုံးပြု၍ NO နှင့် L-citrulline ထုတ်လုပ်သည်။ NO သည်အလွယ်တကူပျော်ဝင်နိုင်သော guanylate cyclase ၏ heme အစိတ်အပိုင်းကိုချည်နှောင်ထားသော target cell များသို့ပလာစမာအမြှေးပါးကိုအလွယ်တကူဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။ guanylate cyclase ၏ဤ activation trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြသော intracellular ဖြစ်ရပ်များကိုထိန်းညှိသော cGMP- မှီခိုပရိုတိန်း kinase ၏ရလဒ် activation နှင့်အတူ cGMP ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်။ cGMP အဆင့်များကို cphp ဖျက်စီးခြင်းနှင့်အချက်ပြခြင်းကိုရပ်တန့်စေသော phosphodiesterases များကထိန်းချုပ်သည်။ Sildenafil (Viagra)၊ tadalafil (Cialis) နှင့် vardenafil (Levitra) တို့သည် phosphodiesterase type2၏အဓိကအင်ဇိုင်းများဖြစ်သော penile erectile တစ်ရှူးတွင်အဓိက cGMP hydrolysis အတွက်အဓိကအင်ဇိုင်းဖြစ်သည်။ ဒီအင်ဇိုင်းကိုတားစီးခြင်းသည် NO / cGMP လမ်းကြောင်းကိုသက်ဝင်စေသည့်လှုံ့ဆော်မှုများကိုတုန့်ပြန်သောအားဖြင့်ဆဲလ်အတွင်းရှိ cGMP အဆင့်များနှင့်ချောမွေ့သောကြွက်သားအပန်းဖြေမှုကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ ထိုသို့သောလုပ်ဆောင်မှုသည်ဤအေးဂျင့်များ၏အောင်မြင်သောအသုံး ၀ င်မှုကိုအထီးကျန် ED ကိုကုသရာတွင်ရှင်းပြနိုင်သည်။
မကြာသေးခင်ကက cGMP လမ်းကြောင်း၏လွတ်လပ်သောချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ် contractility, modulate ရသော, NO receptors, အိုင်းလိုင်းများနှင့်ပန့်များအပါအဝင်အခြားဆယ်လူလာပစ်မှတ်နှင့်တိုက်ရိုက်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ကွောငျးထငျရှားဖြစ်လာသည်။ ထို့ကြောင့် guanylate cyclase အပြင်, NO သွေးကြောနှင့် trabecular ချောမွေ့ကြွက်သား contractility ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းထဲမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေရသောအခြား intracellular ပစ်မှတ်ရှိပါတယ်။
NANC အာရုံကြောများ၏လှုပ်ရှားမှု NO နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များကဲ့သို့အခြားပြန်ပါတယ် neurotransmitters များ၏ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ချိလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့် nonadrenergic, noncholinergic အပန်းဖြေလွယ်ကူချောမွေ့ရာ cholinergic အာရုံကြောက modulated နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် acetylcholine များလွှတ်ပေးရန် adrenergic နှင့် NANC အာရုံကြောအပေါ် muscarinic receptors-Junction pre မှ binding အားဖြင့် NANC input ကို၏ adrenergic input ကိုများနှင့်တိုး၏ရုပ်သိမ်းရေးညှိနှိုင်းလိမ့်မည်။ ထိုကဲ့သို့သောဆီးချိုရောဂါအဖြစ်အချို့သောရောဂါပြည်နယ်များမှာတော့ acetylcholine synthesize နှင့်ဖြန့်ချိဖို့ Corpus cavernosum များ၏စွမ်းရည်ကိုလျော့နေသည်။ ထိုသို့သောဖြစ်စဉ်များဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ခိုးယူ erectile function ကိုအဘို့အတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတာဝန်ရှိဖြစ်နိုင်သည်။ Parasympathetic အာရုံကြောထိုကဲ့သို့သောစအိုလမ်းကြောင်း၏ abdominoperineal ဆိုင်ရာပါရဂူကျမ်းပြုစုခြင်းနှင့်အစွန်းရောက် prostatectomy အဖြစ်ခွဲစိတ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ, စဉ်အတွင်းမှာလည်းအားနည်းချက်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ pudendal အာရုံကြောမော်တာ efferent ပါဝင်နှင့်အာရုံခံ afferent အမျှင်ဟာ ischiocavernous နှင့် bulbocavernous ကြွက်သားအဖြစ် penile နှင့် perineal အသားအရေ innervating ။ Pudendal မော်တာအာရုံခံဆဲလျဆဲလ်ကောင် S2-S4 segments များ၏ Onuf ရဲ့နျူကလိယတွင်တည်ရှိပါသည်။ အဆိုပါ pudendal အာရုံကြောဟာ ischiorectal fossa ၏ posterior နယ်စပ်မှာအပြောင် sciatic ထစ်ကနေတဆင့်ပျဉ်ဝင်သောနှင့် perineal အမြှေးပါးများ၏ posterior ရှုထောင့်ဆီသို့ဦးတည် Alcock ရဲ့တူးမြောင်း (pudendal တူးမြောင်း) တွင်အလုပ်လုပ်ပြီး။ ဒီနရောမှာကကပ်ပယ်အိတ်နှင့်ယုတ်ညံ့ rectal ဒေသထောက်ပံ့သည့် rectal အာရုံကြောမှအကိုင်းအခက်နှင့်အတူ perineal အာရုံကြောမှမြင့်တက်ပေးသည်။ လိင်တံ၏ dorsal အာရုံကြောဟာ pudendal အာရုံကြော၏နောက်ဆုံးအခက်ကဲ့သို့ပေါ်ထွက်လာ။ ဒါဟာထို့နောက် dorsal သွေးလွှတ်ကြောမှနှစ်ဦးနှစ်ဖက်, distally အဆိုပါ dorsal penile ရိုးတလျှောက်လှည့်။ distally အကွိမျမြားစှာ fascicles ပန်ကာထွက်ခြင်း, Tunica albuginea နှင့် penile ရိုးတံနှင့် glans လိင်တံ၏အသားအရေများ dorsum မှ proprioceptive နှင့်အာရုံခံအာရုံကြောဆိပ်ကမ်းထောက်ပံ့။
penile စိုက်ထူ၏ non-အာရုံခံ Module
• Neurogenic disease အာရုံကြောယန္တရားများအပြင်, က vasoactive နှင့် / သို့မဟုတ် trophic သက်ရောက်မှုနှင့်အတူဒေသခံ paracrine / autocrine အချက်များ, ကွောငျးထငျရှားဖြစ်လာသည်, အလှနျလိင်တံအတွက်ချောမွေ့ကြွက်သားများ function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်။ ဤရွေ့ကား endothelins, prostanoids, နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်အောက်စီဂျင်များပါဝင်သည်။
Endothelin-1 (ET-1) သည် endothelin peptides မိသားစုဝင်တစ် ဦး ဖြစ်သည်။ နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ်နှင့်ဆင်တူသည့်သွေးကြောအခန်းများ၏အတွင်းပိုင်းနံရံမှ endothelin လွှတ်ပေးမှုသည်ညှပ်စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ သို့သော်ယင်း၏ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းညှိပေးသည့်ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ဆယ်လူလာယန္တရားများအကြောင်းအနည်းငယ်သာသိရှိရသေးသည်။ Human corpus cavernosum တွင် ET-1 ကို endothelium မှဖန်တီးသည်။ corpus cavernosum ချောမွေ့သောကြွက်သားအားခိုင်ခံ့မြဲမြံစွာကျုံ့စေခြင်း။ endothelin receptors (ETA နှင့် ETB) ၏အဓိကအမျိုးအစားခွဲနှစ်ခုလုံးကို penile corpus cavernosum တွင်ဖော်ထုတ်ထားပြီး endothelium နှင့်ချောမွေ့သောကြွက်သားများပေါ်တွင်ဖြန့်ဝေသည်။ ဒါဟာအစ endothelin NO ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်, ETB အဲဒီ receptor ၏ "စူပါမြင့်မား" ဆှဖှေဲ့ပုံစံမှတဆင့်နိမ့်ပြင်းအားမှာ vasodilatory သက်ရောက်မှုများကွိုးစားအားထုနိုငျကွောငျးအကြံပြုခဲ့သည် သို့သော် penile စိုက်ထူ၌ဤယန္တရား၏အရေးပါမှုကိုမသိရသေးပါ။ ယုန်ရောဂါပုံစံများတွင် penile corpus cavernosum ရှိ ETB receptors သည် alloxan-induced ဆီးချိုယုန်များ၌မြင့်တက်နေပြီး hypercholesterolemic Watanabe ယုန်များတွင်လည်းကျဆင်းနေသည်။ ထို့အပြင်မြင့်မားသောပလာစမာ endothelin ပမာဏကိုဆီးချိုရောဂါနှင့်ဆီးချိုမဟုတ်သောအမျိုးသားများတွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် endothelin သည် trabecular ချောမွေ့သောကြွက်သားအားစဉ်ဆက်မပြတ်သောလေသံဖြင့်ပံ့ပိုးပေးခြင်းဖြင့် penile flaccidity ၏ထိန်းသိမ်းမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ပြီး endothelin ထုတ်လုပ်မှုတွင်အပြောင်းအလဲများသည် erectile function ကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ အများအပြား endothelin အဲဒီ receptor အမျိုးအစားခွဲရွေးချယ်ရန်တီထွင်ခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ရဲ့ ED ၏ကုသမှု၏ထိရောက်မှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုအပြည့်အဝအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
အဆိုပါ NANC အာရုံကြောများအပြင်၌, သွေးကြော endothelium နိုက်ထရစ်အောက်ဆိုဒ် synthesizes နှင့်လွှတ်ပေး။ သူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာအမြှေးပါး receptors binding နှင့် endothelial ဆဲလ်အတွင်း intracellular Ca2 + တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ထိုကဲ့သို့သော acetylcholine နှင့် bradykinin လုပ်ရပ်အဖြစ် Vasodilators ။ ထိုကဲ့သို့သောညှပ်စိတ်ဖိစီးမှုအဖြစ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု, ကိုလည်း endothelium အတွက် NO ထုတ်လုပ်မှုမြှင့်တင်ရန်လူသိများကြသည်။ လိင်တံတွင်, ညှပ်-သွေးဆောင် NO ထုတ်လုပ်မှု endothelium အားဖြင့် cavernosal အလောင်းတွေသို့သွေးစီးဆင်းမှုလျှင်မြန်စွာတိုးပွါးလာသောအခါစိုက်ထူစတင်ခြင်းကာလအတွင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသည်။ ယခင်အပိုင်းထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း endothelium-ဆင်းသက်လာ NO ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ mode ကို, အာရုံကြော-ဆင်းသက်လာ NO မှတူညီသည်။
Prostanoids (eicosanoids, တစ်ပြိုင်တည်းပဲ) endothelial နှင့် corpora cavernosa ၏ချောမွေ့ကြွက်သားဆဲလ်တွေနှစ်ဦးစလုံးအတွက်ဘုံရှေ့ပြေး arachidonic အက်ဆစ်အပေါ် cyclooxygenases ၏အရေးယူမှုအားဖြင့်ထုတ်လုပ်နှစ်ဆယ်-ကာဗွန်အနကျအဓိပ်ပါယျဖြစ်ကြသည်။ Prostanoids ဒေသအလိုက်ပြုမူကာ autocrine နှင့် paracrine ထုံးစံ၌ trophic နှင့်လုပ်သူများသက်ရောက်မှုနှစ်မျိုးလုံးကြိုးပမ်းနေကြတယ်။ penile စိုက်ထူအတွက်တစ်ပြိုင်တည်း၏တိကျသောဖြစ်စဉ်အခန်းကဏ္ဍညံ့ဖျင်းသတ်မှတ်ဖြစ်နေဆဲပေမယ့်, စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထားသူတို့ extracellular matrix ကိုထုတ်လုပ်မှု၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍစေခြင်းငှါဖော်ပြသည်။ အဆိုပါ cavernosal အလောင်းတွေအတွင်းသွေးစီးဆင်းမှုအပြည့်အဝ penile tumescence စဉ်အတွင်းလျှစ်ကတည်းကထို့ပြင် NO ဆင်တူ PGI2 ၏ Anti-platelet aggregating သက်ရောက်မှု (prostacyclin), အသှေးကိုခဲမှုကိုကာကွယ်တားဆီးရန်အတွက်အရေးကြီးသောဖြစ်နိုင်သည်။ လိင်တံထဲမှာငါးမူလတန်းတက်ကြွ prostanoid ဒြပ်ပေါင်းများဟာတစ်ပြိုင်တည်းပဲ PGD2, PGE2, PGF2 ?, PGI2 နှင့် thromboxane A2 (TXA2) ဖြစ်ကြသည်။ Prostanoids penile Corpus cavernosum အတွက်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ကျုံ့နှစ်ဦးစလုံးသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ PGE လူ့ trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားများအပန်းဖြေထုတ်ယူနိုင်ရန်ပေါ်လာသောသာ endogenous Prostaglands လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်; တခြားသူတွေကျပ်ဖြစ်စေတဲ့သို့မဟုတ်ချောမွေ့ကြွက်သားသေံမသက်ရောက်ရှိခြင်း။ အသီးသီး PGD, PGE, PGF, PGI နှင့် thromboxane ၏သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေပေးသော DP, EP, လက်ဗွေ, အိုင်ပီနဲ့ TP ချေါ prostanoid receptors ငါးခုကိုအဓိကအဖွဲ့များရှိပါသည်။ prostanoids ၏ Multi-functional ဖြစ်စေ, ထိုး-မှီခိုသက်ရောက်မှုကွဲပြားခြားနားသောဒုတိယတမန်စနစ်များကိုမှအဲဒီ receptor Subtype နှင့် isoforms ၏နားချင်းဆက်မှီနေဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံး FDA ကအထီး ED ၏ကုသမှုများအတွက် intracavernosal ထိုးဆေးမူးယစ်ဆေးဝါးအတည်ပြုအဖြစ် Clinic, E1 (alprostadil) တစ်ပြိုင်တည်းဖွံ့ဖြိုးလျက်ရှိသည်။
အောက်စီဂျင်တင်းမာမှု penile စိုက်ထူထိန်းညှိအတွက်တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ လူ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းဘာသာရပ်များအတွက် cavernosal အသွေးတော် PO2 ၏တိုင်းတာအောက်စီဂျင်တင်းမာမှုတွေဟာ flaccid ထံမှစိုက်ထူပြည်နယ်မှအကူးအပြောင်းကာလအတွင်း (~ 35 မီလီမီတာ Hg) အဆင့်ဆင့် arterial မှသွေးပြန်ကြော (~ 100 မီလီမီတာ Hg) မှလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲပစ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အောက်စီဂျင်တင်းမာမှုကို Maintenance ခန္ဓာကိုယ်အများစုတစ်ရှူးတစ်အရေးပါအလွန်အရေးကြီးသည်ဒါပေမယ့်လိင်တံက၎င်း၏ပုံမှန် function ကို၏သင်တန်းကာလအတွင်းအောက်စီဂျင်တင်းမာမှုများ arterial မှသွေးပြန်ကြောထဲကနေပြောင်းလဲပေးသောတစ်ခုတည်းသောအင်္ဂါဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအကူးအပြောင်းတစ်ခု Co-အလွှာအဖြစ်မော်လီကျူးအောက်စီဂျင်အသုံးချထားတဲ့သော့ခဒြပ်အင်ဇိုင်းတွေ၏အားသာချက်ယူတဲ့ထူးခြားတဲ့စည်းမျဉ်းယန္တရားရဲ့အခြေခံဖြစ်ပါတယ်။ synthase နှင့် Prostaglands လုပ်လိုက်တာ synthase NO dioxygenases အဖြစ်လူသိများအင်ဇိုင်းတွေတစ်လူတန်းစားနှစ်ခုကောင်းမွန်စွာလေ့လာခဲ့ဥပမာဖြစ်ကြသည်။ လိင်တံ၏ flaccid ပြည်နယ်အတွက်တိုင်းတာနိမ့်အောက်စီဂျင်တင်းမာမှုမှာ, NO များ၏ပေါင်းစပ် trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေတားဆီး, inhibited ဖြစ်ပါတယ်။ NO ထုတ်လုပ်မှု၏ဤတားစီး penile flaccid များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အဖြစ်နိုင်လိုအပ်ပေသည်။ တော်လှန်ရေးသွေးလွှတ်ကြောများ၏ vasodilation ပြီးနောက်သွေးလွှတ်ကြောစီးဆင်းမှုအတွက်တိုးအောက်စီဂျင်တင်းမာမှုပေါ်ပေါက်။ အောက်ဆီဂျင်တိုးမြှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ dilator အာရုံကြောနှင့် endothelium trabecular ချောမွေ့ကြွက်သားအပန်းဖြေဖြန်ဖြေ, NO synthesize နိုင်ကြသည်။ prostanoids များ၏ပေါင်းစပ်အလားတူစိုက်ထူပြည်နယ်နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ flaccid အတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်, အောက်စီဂျင်တင်းမာမှုဒီသွေးကြောအိပ်ရာအတွက်ပစ္စုပ္ပန် vasoactive တ္ထုများအမျိုးအစားများကိုထိန်းညှိစေနိုင်သည်။ မြင့်မားတဲ့အောက်စီဂျင်တင်းမာမှုမှာ, NO နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းကြောင့်သူတို့ရဲ့ပေါင်းစပ်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းမော်လီကျူးအောက်ဆီဂျင်ရရှိမှုမှထုတ်လုပ်နေစဉ်အနိမ့်အောက်စီဂျင်တင်းမာမှုမှာ, norepinephrine နှင့် endothelin-သွေးဆောင်ကျုံ့, ကိုပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်လိမ့်မည်။